Archive du 20190819
Andry Rajoelina 7 volana nihodinkondina fotsiny…
Fito volana katroka anio alatsinainy 19 aogositra no nahazo ny fahefana feno i Andry Rajoelina, taorian’ny fifidianana naha be resaka sy efa nanamarihan’ny mpanara-maso ny vondrona Eoropeanina fa nisy fizaram-bola.
Rodoben’ny mpanohitra Nampahafantarina ny SADC ny fisiany
Ao anatin’ny fivoriana ara-potoana faha-39 tanterahina any Dar es Salaam any Tanzania ny Vondrona SADC (Southern African Development Community) ny 5 hatramin’ny anio 19 aogositra.
Antenimieram-pirenena Holaniana anio ny fitsipika anatiny
Nanomboka ny alarobia lasa teo ny fivoriana iraisan`ny vaomieran`ny lalàna eny amin`ny antenimieram-pirenena.
Fitsinjaram-pahefana tena izy Mitaky fanovana lalàna sy fitsipika maromaro
Teboka roa no tsy maintsy hampiarahana amin`ny fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana.
CNaPS- DINEC Antsiranana Nahazo fanentanana mikasika ny fiahiana ara-tsosialy ireo VRM
Nitondra fiofanana sy fanentanana mikasika ny lalàna mifehy ny fiahiana ara-tsosialy ho an’ireo Vondron’ny Ray aman-drenin’ny Mpianatra (VRM) tao amin’ny tapany Avaratra
Mpiasa Malagasy Tsy ampy fahaiza-manao
Lesoka hatrany ny tsy fahampian’ny fampiofanana arak’asa eto Madagasikara izay miteraka tsy fahaiza-manao amin’ny mpiasa Malagasy.
Asa sosialin`ny antoko Nanao didimpoitra faobe ny TIM
Nanamaivana ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny maro indray ny antoko Tiako I Madagasikara, ny sabotsy lasa teo.
Antohomadinika Mila ho tonga eny afovoan’ny arabe ny fako
Mitaraina avokoa ireo mpampiasa lalana sy ny mponina eny Antohomadinika amin’izao fotoana izao.
Ankorondrano andrefana Trano 100 mahery mety harodana
Misy ny fanotorana tany eny amin’ny fokontany Ankorondrano andrefana amin’izao fotoana izao.